Shiinaha Automatic xusulka biibiile spool flange mashiinka alxanka saaraha iyo qeybiye | Lusheng
Suxulka mashiinka alxanka flall biibiile spool wuxuu la kulmi karaa heerka u qalmida ee tijaabada shucaaca ee ka badan 99% iyo shuruudaha baaritaanka dhalista, tijaabada saameynta, tijaabada siligga iyo foorarka foorarka.
IN LA BUUXIYO MUUQAALKA WELD: Dhererka Haraaga Res 1.5 mm (waa loo hagaajin karaa hadba sida loogu baahdo); dildilaac la'aan, Galmo aan dhammaystirnayn, cilladaha isugeynta oo aan dhammaystirnayn; ma jiro cilado muuqda sida dusha sare, qalliinka hoose, xidid isku xidhka, iwm.
1. Hordhac mashiinka alxanka flange flall spool:
Mashiinka alxanka Flangeay soo saartay shirkadeenu waxay leedahay waxqabad aan la barbardhigi karin iyo isku halayn. Mashiinka taxanaha ah ee loo yaqaan 'PPCW Chuck Chuck' mashiinka alxanka tooska ah wuxuu ku qalabeysan yahay TIG / MAG / SAW seddex nooc oo ah hababka alxanka iyadoo loo eegayo shuruudaha hawlgalka, xaqiiji alxanka tooska ah ee salka dhuumaha, buuxinta iyo daboolka;
Mashiinka alxanka biibiile xusulka Foomamka alxanka ugu weyn waa: Alxanka tooska ah ee alxanka iyo tuubada tooska ah, alxanka gadaashiisa tooska ah ee biibiilaha tooska ah iyo tuubada taper, alxamida dabada tooska ah ee tuubada tooska ah iyo Flange, alxanka gadaashiisa ee tooska ah ee biibiilaha toosan iyo xusulka (marka laga reebo xusulka labada dhinacba biibiile toosan), alxanka badhida otomaatiga ah ee biibiile toosan iyo wadajirka daloolka.
SHURUUDAHA GOLAHA SHARCIYADA WELDED:
Mashiinka alxanka biibiile otomaatiga ah Haddii la isticmaalayo goynta ololka ama plasma, dusha GROOVE waa in sifiican loo safeeyaa, ma lahan karo wax muuqda oo isu eg concave-convex, arc pit.
XAALADDA BULSHADA BULSHADA: Sunta iyo miridhku waa in laga saaraa goobta alxanka ee goobta shaqada si looga fogaado waxyaabaha saameeya tayada alxanka.
Gobolka ka hor inta aan la alxamayn otomaatiga ah: Tuubooyinka tooska ah ee u qalma iyo tuubada caadiga ah waa la isku dhejiyaa, iyo mashiinka alxanka tooska ah ayaa loo isticmaalaa buuxinta iyo daboolida alxanka ka dib markii alxanka argon arc.Mashiinka alxanka alxanka.
Xusulka biibiilaha Mashiinka alxanka flange waxay la kulmi kartaa heerka u qalmida ee tijaabada shucaaca ee ka badan 99% iyo shuruudaha baaritaanka qaadista, baaritaanka saameynta, tijaabada siligga iyo foorarka foorarka.
IN LA BUUXIYO MUUQAALKA WELD: Dhererka Haraaga Res1.5 mm (waa loo habeyn karaa hadba sida loogu baahdo); dildilaac la'aan, Galmo aan dhammaystirnayn, cilladaha isugeynta oo aan dhammaystirnayn; ma jiro cilado muuqda sida dusha sare, qalliinka hoose, xidid isku xidhka, iwm.
2. Xuduudaha farsamada ee mashiinka alxanka dhejiska tuubada:
Adeegso dhexroorka tuubbada
Dhumucda darbiga lagu dabaqi karo
Waxyaabaha la adeegsan karo
Birta kaarboon, birta daawaha ah, birta aan birta ahayn, birta heerkulka hooseeya, birta birta ah ee birta isku qurxisa, birta naxaasta-nikkel, iwm.
Nooca jeexitaanka ee la adeegsan karo
Goobaha kala duwan ee kala duwan sida V, U, double V
Alxanka tuubada lagu dabaqi karo
Alwaaxda qeybaha kala duwan ee tuubbada, sida tuubbada + biibiile, tuubo + flange, dhuumaha + yareynta, dhuumaha + te, tubbada + xusulka, iwm.
Dhererka shaqeynta ee khuseeya
Dhererka wadada alxanka Cantilever
Trolley dhererkiisa wadada
Alxanka qaanso-qalooca, alxanka gaashaan gaashaaman + alxanka qaanso hoosta
Isticmaal qeexida silig alxanka
Xawaaraha alxanka (mm / min)
TIG: 80-120: CO2 / MAG -4 200-400; SAW: 400-800
Waxtarka guud ee prefabrication DN / maalin
CO2 / MAG -4 250-450; SAW: 400-600
Nooca Chuck ee qaadista martida
Qaabka wareega wareega
Mashiinka beddelaadda soo noqnoqda + Qalabka dixiriga dixirka + taageerada qallajinta saxda ah
Nooca xakamaynta xawaaraha Chuck
Beddelaadda soo noqnoqoshada xakamaynta xawaaraha stepless
Heerka dhererka cufka dhexe
Culeyska soo saarista cufnaanta
Isku xidhka tuubada
Saddex-daan chuck clamping
Habka kor u qaadista
Gawaarida + wiishka + hagaha toosan ee saxda ah
Mashiinka alxanka cantilever mobile
Qaadista tiirarka mashiinka alxanka cantilever
Mashiinka + dixirka qalabka dixiriga ah + hage toosan oo toosan
Qaadista istaroogga khaanadda mashiinka alxanka
Mashiinka + hoos udhigga qalabka + iskudhafka iyo labada lammaane + hage toosan oo toosan
Socdaalka Cantilever horay iyo gadaal
Socodka wareegga cantilever
Dhererka 6m, socodka korantada
X / YAxis farsamaynta hagaajinta ganaaxa korantada （SAW）
Motor + fur kubad sax sare + hage toosan laga keeno
Isku hagaaji istaroogga
150mm dusha iyo hoose, bidix iyo midig
CNC oscillator toosan （TIG / MAG）
Qaab dhismeedka iyo halabuurka
Qalabka aluminium ee duullimaadka qaab-dhismeedka guud, nooca xidhan, wuxuu ka ilaaliyaa qiiqa iyo boodhku inay soo galaan
Qaab dhismeedka gudbinta
Stepping matoor + fur kubad sax sare + hage toosan laga keeno
20-60 jeer / daqiiqad
Ugu badnaan 815A, oo hadda lagu qiimeeyay 650A, 100% wareegga waajibaadka, isdhexgalka qalabka sare, awood ka hortagga faragelinta oo xoog leh
Nidaamka Xakamaynta Khabiirka WSP Pipe
Iskudhafka PLC + mashiinka-mashiinka, maaraynta isku dhafan iyo xakamaynta xuduudaha geeddi-socodka alxanka kala duwan, hawlwadeenku "si dhakhso leh ayuu wax u barto", wuxuu gaabiyo qalabka wareegga-soo-saarka
Bixinta dhalida / dib u warshadeynta
Gawaarida Gawaarida Gaarka ah iyo dib-u-warshadaynta mashiinka isku-dhafan ee alxanka otomaatiga ah + tarooli socodka dib-u-warshadaynta qulqulka,
Adeegsiga aaminka ah ee qalabka
Qalabka korontadu wuxuu buuxiyaa shuruudaha shahaadada CE, heerka badbaadada dahaarka / heerka H / IP23
Ficil kasta oo ficil ah waxaa loo dejiyaa xaddidyo nabadgelyo, waxaana jira ilaalin nabadgelyo oo lagu kalsoonaan karo, badhanka joojinta degdegga ah, aasaaska iyo aaladaha badbaadada si looga hortago khaladka ama shilalka
Ku saabsan 35KW (oo ay ku jiraan korontada alxanka)
3. Sawirro dheeri ah oo loogu talagalay mashiinka alxanka dhejiska tuubbada:
4. Natiijada Alxanka Alxanka biibiilaha mashiinka alxanka:
5. Xirxirida iyo rarka mashiinka alxanka flange biibiile spool:
Hore: Mashiinka alxanka alwaaxa kumbuyuutarka kumbuyuutarka
Xiga: Automatic 12 mitir mashiinka alxanka tolmo dheer
Mashiinka Alxanka Flange Alxanka
Isha alxanka toosan ee Argon arc Tig
Mashiinka soo-kabashada qulqulka qumanka oo si toos ah loo arkay
1000w otomaatiga ah 2000w 2000w toosan
Automatic CO2 Mig Mag Inverter Gas gaashaan wel ...
Weelka taangiga otomaatiga ah ee gawaarida alxanka